Yintoni uMsebenzi wePolynomial?
Idijithi kumsebenzi we- polynomial yiyona nto ibonakalisiweyo kakhulu yolu linganiso, obeka inani elikhulu kwisisombululo esingaba nalo msebenzi kwaye amaninzi amaninzi umsebenzi uya kudlula i-axis x xa i graphed.
I-equation nganye iqulethe naphi na enye ukuya emininzi imiqathango, eyahlula ngamanani okanye iinguqu ezihlukeneyo. Ngokomzekelo, i-equation y = 3 x 13 + 5 x 3 inemigangatho emibini, i-3x 13 kunye ne-5x 3 kwaye iqondo le-polynomial li-13, njengoko eli lizinga eliphezulu leliphi na ixesha kwi-equation.
Kwezinye iimeko, i-equation polynomial kufuneka yenziwe lula ngaphambi kokuba idide ifunyenwe, ukuba i-equation ayikho kwifom efanelekileyo. Ezi degrees zingasetyenziselwa ukuchonga uhlobo lomsebenzi ezi zilinganiso zimela: i-linear, i-quadratic, i-cubic, i-quartic, kunye nokufana.
Ukufumanisa ukuba yeyiphi imilinganiselo ye-polynomial imele imisebenzi nganye iya kubanceda izibalo ziqaphele uhlobo luni lomsebenzi awasebenzisana naye njengoko igama ngalinye leganga liphumela kwifomu eyahlukileyo xa igraphed, ukuqala kwimeko ekhethekileyo ye-polynomial nge-degrees zero. Ezinye iidridi zilandelayo:
IsiGaba 0: i-nonzero rhoqo
IsiGaba 1: umsebenzi ongezantsi
Umgangatho 2: i-quadratic
IsiGanga 3: i cubub
IsiGaba sesi-4: i-quartic okanye i-biquadratic
IsiGaba sesi-5: i-quintic
Umgangatho wesi-6: ngokwesini okanye ngesetyhefu
IsiGanga sesi-7: i-septic okanye i-heptic
Isiqinisekiso sePolynomial esingaphezu kweDeor 7 asizange sichazwe ngokufanelekileyo ngenxa yokungabi nantoni yokusetyenziswa kwazo, kodwa iSigqibo 8 singachazwa njenge-octic, iSigqibo 9 njenge-nonic, kunye neDriki 10 njenge-decic.
Ukubiza ama-polyomial degrees kuya kunceda abafundi kunye nootitshala ngokufanayo baqikelele inani lezisombululo kwi-equation kunye nokukwazi ukubona indlela ezi sebenza ngayo kwigrafu.
Isilinganiso somsebenzi sinquma inani elininzi lezisombululo ezinokusebenza kunye nenani elikhulu ixesha eliqhelekileyo umsebenzi uya kudlula i-axis e-x.
Ngenxa yoko, ngamanye amaxesha iqondo lingaba ngu-0, oko kuthetha ukuba i-equation ayinaso isisombululo okanye nayiphi na imeko yegrafu ewela i-axis.
Kule meko, i-polynomial ishiywe engachazwanga okanye ichazwa njengenombolo engafanelekanga njengobuncwane okanye ubuncinci obungaphantsi kokubonisa ukubaluleka kwe-zero. Eli xabiso lidla ngokuba li-polynomial zero.
Kwimimiselo emithathu elandelayo, umntu unokubona ukuba ezi zidijithi zepolynomi zizimisele ngokusekelwe kumigangatho kwi-equation:
y = x (IsiGanga: 1; Isisombululo esinye kuphela)
y = x 2 (IsiGanga: 2; izisombululo ezimbini ezinokwenzeka)
y = x 3 (IsiGanga: 3; izisombululo ezintathu ezenzekayo)
Injongo yale degrees kubalulekile ukuqonda xa uzama ukubala, ukubala, kunye negrafu le mi sebenzi kwi-algebra. Ukuba i-equation iqulethe izicombululo ezimbini, umzekelo, omnye uya kukwazi ukuba igrafu yaloo msebenzi iya kufuneka idibanise i-x-axis kabini ukuze ichaneke. Ngapha koko, ukuba sikwazi ukubona igrafu kwaye ziphindwe kaninzi kangakanani i-x-axis, siyakwazi ukubona ngokucacileyo uhlobo lomsebenzi esisebenza naye.
Ukwahlukana phakathi kweZakhiwo zoMzimba kunye neChimicals
I-Acids neSiseko seSifundo seSifundo
Iingcebiso kunye ne-FAQ ekuthengeni amatya amatsha
Ukudlala njani i-2-Card Poker
Iimpawu zeMculo eziPhambili ze-2009